दीपक राजले किन भने मन्त्री गगन थापा र जनार्दनलाई फिर्ता बोलाऊ ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
१ चैत्र २०७३, मंगलवार १६:४३ 8
अहिले नेपाली जनताको मन जित्न सफल भएका दुई मन्त्री हुन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा । उर्जामन्त्रीले देशलाई नै लोडसेडिङ मुक्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उर्जा मन्त्री र कुलमान घिसिङको प्रयासमा अहिले काठमाण्डौ लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । यत्ता स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य सेवाको वृहत सुधारका लागि कम्तीमा आधारभूत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको जग बसाउने भन्दै जनशक्ति, पूर्वधार र उपकरणमा उल्लेखनीय सुधारका कार्यक्रम एकै पटक अगाडि बढाएका छन् । तर नेपाली काँग्रेसमा मन्त्री गगन थापालाई मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउने कुरा भएको छ । विजय कुमार गच्छदारले मर्यादाक्रम र मन्त्रालय मिले सरकारमा सहभागी हुने बताए पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बारेमा कुरा भएको छ ।
यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दे हाँस्य कलाकार तथा चलचित्र निर्माता दीपक राज गिरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक अभिव्यक्ति दिए जसले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । उनले ‘‘गगन थापालाई काँग्रेसले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउँदै छरे । यो एकदम राम्रो निर्णय हो । सरकारबाट गगन थापा, जनार्दन शर्मा जस्ता एक दुईजना मन्त्रीलाई हटाउनै पर्ने भा छ । म सोचिरहेको थिए चिडियाखानामा यी दुई मान्छेलाई किन राखिएको होला ?’
दीपक राजको यो भनाईले काम गर्ने मन्त्रीहरुलाई धेरै समय नटिकाउने नेपाल सरकारलाई व्यङग्य गरेको छ । नेपालको मन्त्रीहरुमा क्षमता छ र हिजो अँध्यारो भएको काठमाण्डौ आज उज्यालो भएको भन्दै उनले सबैलाई खुलेर काम गर्न दिनुपर्ने बताए । कि काम गर्न देऊ होईन भने सरकारमा राखीराख्न जरुरी छैन दीपकको भनाई छ ।
हिरो हैन कलाकार बन्न चाहन्छन् शिशिर
किन दुब्लाईन् जिया के सी ? पीरले या सिनेमाले !